Ikhaya IZITOLO ZAMAHHALA WE-AMERICAN SOCCER Abadlali bebhola lezinyawo baseCanada I-Alphonso Davies Childhood Indaba Yezindaba kanye ne-Untold Biography Facts
Ukuqala, ubizwa ngokuthi "Umpheki D“. Sikunikeza isembozo esigcwele se-Alphonso Davies Childhood Indaba, i-Biography, amaqiniso omndeni, abazali, impilo yakuqala, indlela yokuphila, impilo yomuntu uqobo kanye neminye imicimbi ephambili kusukela lapho ayeseyingane kuya lapho ethandwa khona.
Impilo nokuvuka kukaDavies Alphonso. Ama-Credits Wezithombe: I-Instagram neNhloso.
Yebo, mina nawe sazi ukuthi ungomunye wabadlali bebhola abanesiphiwo kakhulu ukuthi baphume kwi-MLS. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abalandeli ababheka inguqulo yethu ye-Alphonso Davies 'Biography ethakazelisa kakhulu. Manje ngaphandle kokunye, ake siqale, kuqala nge I-ToC, elandelwa ngu-Alphonso Davies Wiki, ngaphambi kwendaba yakhe ephelele.
Alphonso Davies ' Indaba Yengane:
U-Alphonso Boyle Davies wazalwa ngosuku lwe-2 kaNovemba 2000 kunina, uVictoria Davies, nobaba wakhe, uDebeah Davies, ekamu lababaleki elidumile laseBuduburam eGhana. Uyindodana yokuqala nendodana kwezingane ezintathu azalelwa uVictoria noDebea.
Yebo, usizwile kunjalo!, U-Alphonso uzalelwe ekamu lababaleki laseGhanian, okusho ukuthi, ukude kakhulu nesizwe sakwaGhanian. Iqiniso litshelwe!, kwasekuqaleni wayehloselwe ukuba ngowesizwe waseLibrari. futhi Uthi bewazi?… Abazali baka-Alphonso Davies babaleka eLiberia (izwe elisentshonalanga ne-Afrika) ngonyaka ka-1999, ngemuva kwempi yombango yesibili yaseLiberia.
Hhayi abazali bakhe kuphela, kepha iningi lamalungu omndeni ka-Alphonso wakwaDavies ahamba amakhulu amaMiles enqamula eNtshonalanga Afrika aze agcina ethola indawo ethe xaxa ekamu lababaleki laseBuduburam eduze nase-Accra eGhana lapho azalelwa khona. Kwakusekamu lapho u-Alphonso osemusha achitha khona iminyaka emine yokuqala yokuphila kwakhe ekhulela ezweni elingafani nemvelaphi yakhe yomndeni.
Abazali baka-Alphonso Davies bebengagijimeli impi kuphela. Bebehamba amakhilomitha amaningi bedlula eNtshonalanga Afrika beyofuna impilo engcono yengane yabo engakazalwa- iqhawe lebhola elizayo. Isikweletu Sezithombe: Imephu ye-Google ne-Instagram.
Alphonso Davies ' Ingemuva Komndeni:
Khuluma ngemvelaphi yomndeni ka-Alphonso Davies, abazali bakhe ngaphandle kokungabaza, bangabantu baseLiberia abavela emndenini ompofu. UDebeah noVictoria babeyimibhangqwana emisha lapho kuqubuka iMpi Yesibili YaseLiberia, intuthuko eyabashiya benezinketho zokubamba iqhaza empini noma ukubaleka. Ngenhlanhla, bakhetha le yokugcina futhi manje, bobabili (abfanekiselwe ngezansi) baphila ukwazisa ukukhetha kwabo kokuphila kunokuqothulwa kwesihlahla somndeni wabo.
Abazali bakhe bamamatheka namuhla ngoba bathatha isinqumo esinengqondo sokubaleka impi kuqala. Isikweletu: I-Instagram.
“Bekunzima impela ukuhlala eLiberia ngesikhathi sempi ngoba ukusinda kusho ukuthi kufanele uphathe izibhamu ukuze ulwe. Besingenandaba nalokho, ”
kukhumbula ubaba ka-Alphonso Davies. Ngakolunye uhlangothi, naye ukhumbula ukuwela izidumbu ukuze athengele amalungu omndeni wakhe ukudla. Ngempela, kwakungeyona leyohlobo yemvelo abangafuna ukuba izingane zabo zikhule kuyo.
Alphonso Davies ' Ukwakhiwa Kwemfundo Nokunakekela:
Umndeni ka-Alphonso Davies wamukele isicelo sokufudukela eCanada njengengxenye yohlelo lokuphinda futhi lapho wayeneminyaka emihlanu. Bafika kuleli ngonyaka ka-2005 kanti ekuqaleni bazinza eWindsor e-Ontario.
Ngemuva konyaka, lo mndeni wathuthela edolobheni lase-Edmonton e-Alberta. Kwakunedolobha lapho impilo yaqala khona impela ngo-Alphonso, owakhula eyingane ejabule eceleni kukadadewabo omncane uRuth nomfowethu omncane owaziwayo.
Wayengakhuli ngokujabulisayo eCanada kodwa wayesethubeni lokuba yisakhamuzi saseCanada. Isikweletu Sezithombe: I-Youtube.
Eqinisweni, amasimu otshani weNorthmount Elementary e-Edmonton kulapho u-Alphonso Davies aqala khona ukufunda ukudlala ibhola njengemidlalo yezingane. Yilapho lapho khona ikusasa lakhe lebhola laqala khona.
Ngokuqondene nemfundo yakhe, u-Alphonso waqala ukuya esikoleni sikaMama uTheresa Catholic edolobheni elifanayo le-Edmonton. Ngaleso sikhathi, kwakungeke kwenzeke ukuthi anganaki amakhono akhe emvelo acijimisayo nendlela aphatha ngayo ontanga yakhe ngenkathi edlala ibhola esikoleni sikaMama uTheresa Catholic.
Alphonso Davies ' Iminyaka Yokuqala Ebholeni:
Ngibonga uMelissa Guzzo - uthisha ka-Alphonso ofunda ibanga lesithupha kanye nomqeqeshi wezemidlalo esikoleni sikaMama uTheresa Catholic - isoka lezemidlalo labhaliswa ohlelweni lwangemva kwesikole lwezingane zasemadolobheni olubizwa ngokuthi “Uhlelo Olukhululekile Lwezinyawo".
Ngokwegama layo, Mahhala yayikhululekile njengoba isiza abazali baka-Alphonso Davies abangakwazanga ukukhuphula imali yebhola kwezinye izikole zebhola. Lesi sinyathelo sisize nezinye izingane zasemadolobheni ezingakwazi ukukhokha imali yokubhalisa noma zokuhamba ukuhlola izintshisekelo zazo ebholeni. U-Alphonso ngokuhamba kwesikhathi, ujoyine iklabhu yasekhaya iNicholas Academy. Lokhu kulandelwe ngumsebenzi obalulekile weminyaka eyisishiyagalombili ne-Edmonton Strikers.
I-Alphonso Davies 'Biography- Indaba Yendlela Yodumo:
Ngo-2015, abazali baka-Alphonso Davies bavumelana ngokushintshana ngomsebenzi, umnikelo owawuzothatha indodana yabo yokuqala kubo ukuyodlala eVancouver. Ngokwesilinganiso sethu, ibanga elingamakhilomitha ayi-1,159.5 (ngomgwaqo) ukusuka ekhaya lomndeni e-Edmonton. UDebeah noVictoria banikeza u-Alphonso izibusiso zabo futhi bamthumela ukuba ayojoyina ukusekelwa kwentsha yeVancouver Whitecaps.
Lowo owayeneminyaka engu-14 ngaleso sikhathi wahlabeka umxhwele ekilabhini, kangangokuba waba ngumdlali wokuqala omncane ukusayina inkontileka ye-USL eneminyaka engu-15, izinyanga ezintathu ngo-3. Yini enye?… U-Alphonso wanyuselwa eqenjini lokuqala leVancouver Whitecaps FC ngonyaka ka-2016, wenza idili lakhe le-MLS ngawo lowo nyaka futhi waba nokubonakala okumangazayo.
Eminyakeni engu-15 yobudala, u-Alphonso wayesemncane futhi efisa ukuba nomlingiswa ofanele wokuphumelela. Isikweletu Sezithombe: VancouverWhitecaps.
I-Alphonso Davies 'Biography- Indaba Yokuqamba:
Eqophelweni eliphezulu lomsebenzi ka-Alphonso neVancouver Whitecaps FC, waqanjwa njengomdlali weqembu leNhlangano Yonyaka we-2018 waphinde wathola umklomelo we-whitecaps 'Goal of the Year. Ngemuva kwalokho, wahamba ngendlela eya ekilabhini ngokushaya amagoli amabili ekunqobeni kwabo 2-1 amaPortland Timbers. Ngalesi sikhathi, i-prodigy encane yayingazizwa ikusasa lakhe limbiza ngokuvela eYurophu.
Ezinyangeni kamuva ngoJanuwari 2019, u-Alphonso waqala isizini entsha edlalela izihlabani zaseGerman iBayern Munich. Usayinwe ekilabhini ngemali erekhodiwe ngo- $ 9.84m ngonyaka we-2018. Selokhu lo mdlali oneminyaka engu-19 wajoyina ikilabhu, ubelokhu ehlikihla amahlombe ngama-superstars - njenge URobert Lewandowski, Philippe Coutinho, UDavid Alaba - futhi usezuze nesiqu sakhe sokuqala seBundesliga nale kilabhu. Abanye, njengoba besho, umlando.
Ngempela, ukwakheka kwakhe udumo kuye kwaba semkhathini. Isikweletu Sezithombe: ESPN.
Ngubani u-Alphonso Davies ' Ntombi?… Ingabe Unomfazi Nezingane (s)?
Uyitholile ngempela umdlalo ophelele kuJordyn Huitema. Angithi?
Kude nomkhakha wokudlala, u-Alphonso wenza izindaba ngobudlelwano bakhe nentombazane ezelwe yaseCanada uJordyn Huitema. Akukaziwa okuningi ukuthi ama-lovebird aqala nini ukuqomisana. Kodwa-ke, besebe ndawonye isikhathi eside ngokwanele ukuba babonwe njengezithandani zaseCanada Power Soccer League ngabezindaba. Lokhu kungenxa yokuthi uJordyn udlala ibhola eliqeqeshiwe leFrance Division 1 Féminine kilabhu yaseParis Saint-Germain neqembu lesizwe laseCanada.
U-Alphonso uvame ukungena eParis ukuyochitha isikhathi esihle nentombi yakhe uJordyn ngaphambi kokubuyela eBayern Munich. Babeka ukunakwa okwenele emisebenzini yabo yokuqothula, intuthuko echaza ngenkathi bangenandodana (amadodakazi) noma amadodakazi) ngaphandle komshado. Ngaphandle kwalokho, asikho isinqumo sokuthi kungenzeka bathathe ubuhlobo babo buye kwelinye izinga (umshado) kungakabiphi.
Alphonso Davies ' Impilo Yomndeni:
U-Alphonso Davies ukweleta impumelelo yakhe ebholeni emndenini wakhe omangalisayo. Hlala emuva uphumule njengoba sikulethela amaqiniso ngamalungu omndeni wakhe akulesi sigaba. Siqala ngokukusiza ukuthola amaqiniso amaningi ngabazali baka-Alphonso Davies.
Mayelana no-Alphonso Davies Ubaba nomama:
Abazali bomnqobi nguDebiya noVictoria ngokulandelana. Ngo-2005 uDebeah noVictoria benza isinqumo esiguqula impilo sokufudukela eCanada besuka eGhana bengazi lutho ngendawo noma ukuba nezihlobo lapho. Babekholelwa nje kuphela ukuthi ukuhamba kuzosiza ukukhokhela umntwana u-Alphonso ikusasa eliqhakazile.
Hlangana nabazali bakaDavies Alphonso. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Kuyavela ukuthi lesi sinqumo sikhokhe ngaphezulu kwalokho ababengakucabanga. Eqinisweni, ophumelele uyaphawula ukuthi ukuthole kulula ukuzikhuthaza noma nini lapho ebheka emuva ezinqumweni eziguqula impilo ezenziwa ngabazali bakhe abaxhasayo njalo mayelana nekusasa lakhe.
Mayelana no-Alphonso Davies Izihlobo nezihlobo:
U-Alphonso unezingane zakubo ezimbili ezindala kakhulu kunaye. Bahlanganisa udadewabo omncane uRuth nomfowethu omncane aziwa kancane. Lezi zingane zazalelwa eCanada. Ngenxa yalokho, akudingekanga balandele inqubo yokuthola izakhamuzi zaseCanada njengoba kwenza u-Alphonso.
U-Alphonso Davies noyise, umama kanye nezingane zakubo ezincane. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Yize i-winger inganikanga abezindaba ukuthi bazi okuningi ngezingane zakubo. Akazange futhi akhulume ngomndeni wakhe nangokhokho bakhe njengoba kuhlobene nogogo wakhe ongumama noyise. Ngokufanayo, omalume baka-Alphonso, umalume, abazala, umshana kanye nomshana abaziwa kakhulu ngesikhathi sokubhala le bio.
Alphonso Davies ' Impilo Yakho:
Ngubani u-Alphonso Davies?… Uyazi ukuthi ufaka izici zobuntu ezivezwa ngabantu abaqondiswa iScorpio Zodiac Sign? Iqiniso liwukuthi, Umpheki D (igama lakhe lesidlaliso) unentshisekelo, unembile, uvelele futhi akunobunzima ukusho ngqo lokho afuna ukukusho.
Bambalwa abadlali abakwaziyo ukuzichaza kahle. U-Alphonso wenza uhlu. Isikweletu Sezithombe: Bundesliga.
Okwenezelwa ezimfanelweni zomuntu u-Alphonso's is his penchant for not toveza okuningi ngempilo yakhe yangasese neyangasese.
Intshisekelo kanye nezinto zokuzilibazisa eziwinayo zihlanganisa ukudansa, ukudlala imidlalo yevidiyo nokuchitha isikhathi esihle nomndeni wakhe nabangane. Ubuye futhi ekuphekeni, ekuzilibaziseni okwenze waqamba igama lakhe lesidlaliso "Umpheki D".
Alphonso Davies ' Amaqiniso Wendlela Yokuphila:
Mayelana nokuthi u-Alphonso Davies wenza futhi ayisebenzise kanjani imali yakhe, unemali elinganiselwa ku- $ 1 million ngesikhathi sokubhala le biography. Imimangaliso yengcebo ye-winger isuselwa emiholweni nasemiholweni ayithola ngokudlala ibhola lezindiza eziphezulu.
I-winger iphinda ifake imali ebalulekile ekuvumeleni. Ngakho-ke akukho mibuzo maqondana nokuthi angakwazi kanjani ukuthola izimpahla zikanokusho njengezimoto ezihlukile nezindlu ezibizayo.
Isithombe esingajwayelekile somuntu oyisa izame ukuthatha isikhwama sakhe semali ngemuva ngemuva kwemoto ebikezelwe njenge-Audi. Isikweletu Sezithombe: Spox.
Alphonso Davies ' Amaqiniso:
Ukuqeda indaba yethu yobuntwana ka-Alphonso Davies kanye ne-biography, nazi amaqiniso amancane angaziwa noma angenakhulunywa mayelana ne-winger.
Iqiniso #1- Ukwehlukaniswa Kwakhe Kwemivuzo Ngomzuzwana owodwa:
Selokhu aqala ukusebenza ngoJanuwari 2019, abalandeli abaningi bazindle ngawo uhola malini uDavies Alphonse?…. Ngaleso sikhathi sonyaka ka-2019, inkontileka kaChef D yambona eqongelela iholo elikhuphukayo lamaRandi ayizigidi eziyi-1.2 ngonyaka. Okumangaza kakhulu ngezansi ukwehla komholo ka-Alphonso Davies ngonyaka, inyanga, usuku, ihora, umzuzu nemizuzwana.
Imholo ku-Euro (€)
Ukuthola imali ngamakhilogremu (£)
Lokho akuholayo Ngonyaka € 1,200,000 £ 1,034,559
Lokho akuholayo Inyanga ngayinye € 100,000 £ 86,213
Lokho akuholayo Isonto ngalinye € 24,390 £ 21,028
Lokho akuholayo Ngosuku € 5,949 £ 5,129
Lokho akuholayo Ngehora ngalinye € 248 £ 214
Lokho akuholayo Ngomzuzu € 4.13 £ 3.56
Lokho akuholayo nge-Serconds € 0.07 £ 0.06
Lokhu kungakanani u-Alphonso Davies azuze selokhu waqala ukubuka leli khasi.
Uma okubonayo ngenhla kuhlala ku (0), kusho ukuthi ubuka ikhasi le-AMP. Manje Chofoza LAPHA ukubona ukunyuswa komholo wakhe ngemizuzwana. Uthi bewazi?… Indoda ejwayelekile eJalimane kudingeka isebenze okungenani iminyaka eyi-1.84 ukuze ithole € 86,123, okuyimali u-Chef D ahola ngayo ngenyanga engu-1.
Iqiniso # 2- Ukungathembeki Kumazinga weFIFA:
U-Alphonso unolwazi nje lweminyaka emibili ukudlala ibhola lezindiza eziphezulu, intuthuko echaza ukuthi kungani enesilinganiso esiphansi se-FIFA esingu-73. Kuliqiniso elaziwayo ukuthi isikhathi siyaphola futhi siyathuthuka. Leli cala bekungeke kwehluka kumuntu onqobayo njengoba enamandla okudlula kuma-90, aze abe ngumdlali webhola ophambili weFIFA.
Izilinganiso zakhe nakanjani zizoqopha ukwanda kwesimo sezulu eminyakeni elandelayo. Isikweletu Sezithombe: I-SoFIFA.
Pizingqimba obhemayo futhi aphuze ngokunganaki anento yezindebe ezimnyama nokuhlala egijimisana nomthetho. I-Alphonso isiphikiso esiphelele kuyo yonke imiphumela.
Iqiniso # 4- Ama-tattoos:
Liyini iphuzu lokuthi ube nama-Tattoos lapho umuntu ezimnyama ngokuziqhenya? Ngaphandle kokuthi ubuciko bomzimba budonswe ngemigqa emhlophe, u-Alphonso ubengeke adinge noma ngubani ukuze aphakamise ukuphakama kwakhe okungamamitha ayi-5 amayintshi.
Ngabe kukhona tattoo? sazise ebhokisini lokuphawula. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Iqiniso # 5- Iyini Inkolo ka-Alphonso Davies ':
Uyasikhumbula isikole sikaMama uTheresa wamaKatolika?… Yebo, yisikole samaKatolika phakathi Edmonton, Canada. Sisebenzise lokho ukusho ukuthi abazali baka-Alphonso Davies kungenzeka ukuthi bakhulise indodana yabo ukuthi ilandele izinkolo zobuKristu. Yize kunjalo, osemusha akakaze acace ngqo ngokuthinta kwakhe ezindabeni zokholo. Kodwa, izingqinamba zethu zithanda ukuthi u-Alphonso abe ngumkristu ngoba unodadewabo ogama lakhe linguRuth ngenkathi umama wakhe enegama - uVictoria.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Alphonso Davies yethu Yobuntwana Indaba Yezindaba Zasekhaya kanye ne-Untold Biography Facts. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
UJoseph NK Kolleh Februwari 27, 2020 Ku-11: 25 pm
Ngijabule kakhulu njengomuntu waseLiberia ukubona umfowethu waseLiberia edlala lolu hlobo lwebhola, ngimufisela okuhle. Bonke abantu baseLiberia badlulisela ukubonga kuwe mfowethu u-Alphanso Davies, yize uzivumelanisa neCanada, sisakuthanda njengeLiberia.Sicela ubuye ekhaya uzokwenza izinto ezincane ezibalulekile ezweni.
UDaniel Wonsiah Ephreli 29, 2020 Ngo-2: 56 am
Unkulunkulu anibusise Alphonso LIB khumbuza ikhaya lakho bro siyakuthanda siyabonga
N Zico Wreh Agasti 24, 2020 Ku-1: 50 am
Ngisanda kubuka okwenziwe nguwe ngesikhathi seChampion League yokugcina nePSG. Ungumdlali omuhle kanjena.
ULarry M. Melling Agasti 24, 2020 E-8: 46 pm
Ngijatshuliswe yile-biography ka-Alphonso, futhi njengomuntu waseLiberia, ngiyaziqhenya ngokwazi ukuthi usanda kuwina umqhudelwano weChampions League neklabhu yakhe yaseJalimane. ILiberia iyaziqhenya ngawe, Alphonso !!!! Khuphuka phezulu futhi uzokwenza umehluko omkhulu kakhulu ngolunye usuku
Godwin Agasti 25, 2020 Ku-1: 51 am
Ngiyakhuleka uthola impumelelo ephezulu kakhulu kwezinyawo
(Ngizoba ngumqobi we-balon d'or).
IGhana ikhaya lakho
UJustin Martor Agasti 25, 2020 Ku-2: 12 am
Ngijabule kakhulu futhi ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngomshikashika omuhle futhi ophumelelayo wabazali laba baseLiberia ngalokho abakwenzile esikhathini esidlule ukuze kusizakale impumelelo yanamuhla
Alphanso isibhakabhaka umkhawulo wakho mfowethu, uzokwenza okungaphezu kwalokho
INkosi mayibe nawe kuphrojekthi yakho!
We Liberins sonke sikanye nani njengoba sikwenza phambilini ezweni elihamba phambili eLiberia futhi namuhla UnguMongameli Wezwe lethu.